ထိုင်းရောက်ITလူငယ်များ: February 2013
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 10:20 AM No comments:
SceenShot for ( Pc App )
computer desktop ကို sceenshot ရိုက်ခြင်တဲ့ ဘောဒါများအတွက် လွယ်လွယ်ကူကူ နဲ့ sceenshot
ရိုက်လို့ ရတဲ့ software လေးပါ အသုံးလိုသူများ အောက်ကလင့်ကနေဒေါင်းလိုက်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 9:51 AM No comments:
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 1:15 AM 1 comment:
Samsung galaxy s Advance i9070 ကို Jelly Bean 4.1.2 thai offical firmware တင်နည်း
Samsung galaxy s Advance i9070 ကို Jelly Bean 4.1.2 thai offical firmware တင်ခြင်တဲ့ အကို(.......)
အတွက်နဲ့ တစ်ခြာ ဘောဒါတွေ အသုံးလိုရင် အဆင်ပြေအောင် ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ thai offical firmware
ထွက်တာ ကြာနေပါပြီ ကျွန်တော်အလုပ်မအားလို့တင်မပေးတာပါ firmware မတင်ခင် samsung usb driver တောအရင်သွင်းထားရမှာပါ ကဲတင်ခြင်တဲ့ ဘောဒါများ အောက်ကနေ လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်းတွေ ဒေါင်းလိုက်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 10:58 AM No comments:
IOS 6+ အထက်တွေမှာ MMKeyboard6+ နဲ့ အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် settings ပြန်ချိန်နည်း
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 11:15 AM 1 comment:
Labels: Apple, font နှင့် keyboard သွင်းနည်း
Galaxy Note 10.1 16 Gb ကိုအလွယ်ကူဆုံး root လုပ်နည်း
Galaxy Note 10.1 16 Gb ကိုExynosAbuse-v1.40.apk လေးနဲ့ အလွယ်ကူဆုံး root နည်းလေးပါ..(75% or 100%)
(မြန်မာfontအတွက်တော့ ok ပါတယ်..)
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 9:40 AM No comments:
Samsung Galaxy S I9000 ကို root လုပ်နည်း
Samsung Galaxy S I9000 ကို root လုပ်ခြင်တဲ့ ဘောဒါတွေ အတွက် root မလုပ်ခင် computer မှာ samsung usb driver
ကိုအရင်သွင်းထားရမှာပါ အာလုံးအိုကေပြီဆိုရင် root လုပ်ဖို့ အတွက် root ဖိုင်းကိုဒေါင်းလိုက်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 9:18 AM No comments:
Samsung Galaxy S GT-i9000 ကို offical 2.3.6 ပြန်တင်နည်း
Samsung Galaxy S GT-i9000 ကို offical 2.3.6 ပြန်တင်ခြင်တဲ့ ဘောဒါတွေ အတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
အရင်ဆုံးလိုအပ်တဲ့ driver ဖိုင်းတွေ ကို ကွန်ပျူတာမှာ အရင်သွင်းလိုက်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 9:02 AM No comments:
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 3:19 AM2comments:
Labels: Huawei, Huawei firmware တင်နည်း
Samsung Galaxy S3 Clone i9300 MTK6577 Android 4.1 Phone တွေကို firmware တင်နည်း
အခုနောက်ပိုင်ထိုင်းမှာ တောတောတွေ့ ရတဲ့ တရုတ်လုပ် galaxy s3 clone တွေကို firmware တင်နည်းပြော ပြပါမယ် တရုတ် android phone တောတောများများဟာ အမှာလုပ်မိတာနဲ firmware
လစ်တောတာဘဲ အများအာဖြင့်root လုပ်ပြီ boot ပြန်အတက်မှာ samsung logo မှာရပ်နေတက်ပါတယ်
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 10:30 AM4comments:
Samsung Galaxy Ace Plus GT-S7500, GT-S7500L အတွက်firmwareပြန်တင်နည်း
samsung galaxy ace plus GT-S7500, GT-S7500L အတွက်firmwareပြန်တင်ခြင်တဲ့ ဘောဒါများအတွက်
တင်ပေးလိုက်တာပါ GT-S7500, GT-S7500L တွေက firmware တင်နည်းတူတူပါဘဲ မော်ဒယ်နံပါတ်
တာကွဲတာဖြစ်သောကြောင့် firmware မတင်ခင် မိမိ firmware နံပါတ်မှန်အောင်ရွေးပြီ တင်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 10:18 AM4comments:
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 6:13 AM3comments:
Video Studio pro x5 full version ( Pc App)
video တည်ဖြတ်ဝါသနာတဲ့ ဘောဒါတွေ အတွက် ဒီကောင်က video ရိုက်ကူတည်ဖြတ်သမားတွေ အများအာဖြင့် အသုံးပြုကြတာပါ မိမိကျွမ်းကျင်ရင် ကျွမ်းကျင်သလောက် ရုပ်ရှင်ကောင်ကောင်တည်ဖြတ်နိုင်ပါတယ် လက်တည့်စမ်မဲ့ဘောဒါများ ဒေါင်းယူးသွားကြပါ
ဖိုင်းဆိုဒ်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် မူရင်ဆိုဒ်ကနေ ဒေါင်းလုပ်ယူကြပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 4:48 AM No comments:
Assassins,Creed (Andrid HD Game)
အတိုက်အခိုက် အခုတ်အထစ် အက်ရှင်ဂိမ်တွေကြိုက်တဲ့ ဘောဒါများအတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ လိုအပ်တဲ့ ဘောဒါများအောက်ကနေဒေါင်းယူလိုက်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 11:04 AM3comments:
Samsung Galaxy mini GT.5570 , GT.5570B , GT.5570L စသည့်model တွေကို offical firmware ပြန်တင်နည်း
Samsung Galaxy mini GT.5570 , GT.5570B , GT.5570L စသည့်model တွေကို အကြောင်းအမျီုးမျီုးကြာင့် firmware ပြန်တင်ခြင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်
ပြန်တင်ပေးလိုက်ဒါပါ firmware မတင်ခင် မိမိဖုန်း model နံပါတ်တွေကို မှန်အောင်
ရွှေးပြီ firmware ကိုတင်ပါ လိုအပ်တဲ့ဖိုင်းတွေကို အောက်ကလင့်ကနေဒေါင်းယူလိုက်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 10:47 AM No comments:
K TOUCH W650 နှင့် W619 ကို official firmware ပြန်တင်နည်း
K TOUCH W650 နှင့် W619
ကို official firmware ပြန်တင်ခြင်တဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ ဒီနှစ်လုံးfirmware တင်နည်းတူတူပါဘဲ thai မှာကျွန်တော် ကလိဖူသလောက် k.touch ဖုန်းတွေက recovery mode ခေါ်လို့ ရပါတယ်
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 10:22 AM No comments:
Labels: K-touch, K-touch Firmware တင်နည်း
SRS One Click Root for Android Phone
Android phone တောတောများများကို root လုပ်နိုင်မဲ့ root tool လေးပါ လုပ်ရတာလဲ လွယ်ပါတယ်
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် စမ်ကြည့်တာ အဆင်ပြေပါတယ် ၁မိနစ်အတွင်မှာ root ဖြစ်ပါတယ်
root လို့ ရတဲ့ ဖုန်းအမျိုးစာကို အောက်မှာ ၀င်ဖတ်လိုက်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 9:54 AM5comments:
Iphone Ipad Ipod -Android-smartphone အသုံးပြုနေ တဲ့ မိတ်ဆွေများအားလုံး မိမိတို့ ကွန်ပျူတာနဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီး အသုံးပြုနေတဲ့ Android-smartphone တွေကို ကွန်ပျူတာမှတဆင့် ဖုန်းထဲကို app တွေ install & uninstall ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း ၊ backup ပြုလုပ် ထားနိုင်ခြင်း ၊ data recoveryပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ SMS & MMS massages များကြည့်ရှု့ ပြီး reply ပြန်လုပ်ခြင်း၊
Posted by Zawlin at 6:07 AM 1 comment:
Labels: Moborobo PC Suite, pc software
sony xperia sola လေကို firmware တင်နည်း
sony xperia sola လေကို firmware ပြန်တင်ဖို့ အတွက် လိုအပ်တာလေတွေဒေါင်လိုက်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 11:56 PM No comments:
Labels: SONY, Sony Firmware တင်နည်း
ဒီတစ်ခါ SONY ဖုန်းကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက် ဘာbox မှသုံးစရာမလိုဘဲ firmware
တင်နည်းကို တင်ပြပါမယ် Firmware တင်ဖို့ အတွက် internet တောရှိရပါမယ် 0nline ကနေတင်မှာ
ဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိအသုံးပြုတဲ့ internet ပေါ်မူတည်ပြီ ကြာတက်ပါတယ် Net လိုင်ကောင်ရင်တော ခဏပါဘဲ ဒီကောင်က sony phone တောတောများများကို firmware တင်လိုရပါတယ် ကဲfirmware
တင်ခြင်သူများအောက်ကဒေါင်လုပ်လင့်ကနေ software ကိုဒေါင်လိုက်ပါ fireware တင်မဲ့လူများမိမိဖုန်းနဲ့
သက်ဆိုင်တဲ့ driver များကို အရင်သွင်းထားပါ ဒါမှ firmware တင်လိုအောင်မြင်ပါမှာ ကဲစလိုက်ရအောင်
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 11:35 PM No comments:
i mobile iQ6 ကို firmware ပြန်တင်နည်း
i mobile iQ6 ကို firmware ပြန်တင်ခြင်တဲ့ ဘောဒါများအတွက် imobile iQ6 firmware တင်နည်းပါ
firmware ပြန်မတင်ခင်မှာ ကိုယ်ဖုန်းရဲ့ firmware Custom build version ကိုသိထားရပါမယ်
Custom build version ကိုတော ဖုန်းရဲ့ settings/about phone ရဲ့အောက်ဆုံးမှာရှိပါတယ်
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 5:33 AM2comments:
imobile istyle Qနဲ့ စတဲ့ Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6 .ဖုန်းတွေကို အလွယ်တစ်ကူ root လုပ်နည်း
imobile istyle Qနဲ့ စတဲ့ Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6 ..စသည့်ဖုန်းတွေကို အလွယ်တစ်ကူ root လုပ်ခြင်တဲ့ဘောဒါတွေအတွက် ပို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အရင်blog ဟောင်တုန်ကလဲ
imobile phone နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ root လုပ်နည်းတွေ တင်ပေးဖူပါတယ် အခုဒိကောင်က
လုပ်ရတာ ပိုအဆင်ပြေပြီ ပိုလွယ်လို့ ပါ root မလုပ်ခင် ကိုယ်ဖုန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့
cpu driver တွေကို computer မှာအရင်သွင်းလိုက်ပါ ဒါမှ root လုပ်လို့ အောင်မြင်မှာပါ
ကျွန်တော်ကတော imobile phone တွေများအများဆုံးသုံးတဲ့ cpu driver တွေကိုစုပြီ တင်ထားပေးပါတယ်
အသုံးလိုသူများ အောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်လိုက်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 3:30 AM4comments:
Posted by Zawlin at 10:04 AM No comments:
china tablet ( Cpu WM8650 ) သုံးတဲ့စက်တွေကို firmware ပြန်တင်နည်း
China tablet တွေမှာ ပြသနာအများဆုံးဖြစ်တာက boot ပြန်တက်တဲ့အခါ Logo ကနေပြန်မတက်တာများပါတယ် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် firmware ပြန်တင်တဲ့အခါ
စက်တစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံး firmware တင်နည်းမတူပါဘူ ကျွန်တော်အခု Cpu WM8650
သုံးတဲ့ tablet ကို firmware ပြန်တင်ပြပါမယ် ဒီကောင်ကို firmware ပြန်တင်ဖို့ အတွက်
SD card ကောင်ကောင်တစ်ခုလိုပါတယ် ကဲfirmware တင်ဖို့ အတွက် အရင်ဆုံ firmware
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 9:58 AM3comments:
K-touch W619 ကို offical firmware 2.3.6 တင်နည်း
K-touch W619 ကို offical firmware ပြန်တင်ခြင်တဲ့ ဘောဒါများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
thai မှာကျွန်တော် ကလိဖူသလောက် k.touch ဖုန်းတွေက recovery mode ခေါ်လို့ ရပါတယ်
မြန်မာပြည်က ဘောဒါတစ်ယောက်ကို တစ်ခါမေးကြည့်ဖူတယ် မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ကောင် recovery mode ခေါ်လိုမရဘူတဲ့ recovery mode ခေါ်မရတဲ့ ဘောဒါတွေအတွက်ဘာမှ မပူပါနဲ့recovery mode
ခေါ်တဲ့နည်းပါတင်ပေးသွားမှာပါ recovery mode ခေါ်လို့ ရသူများ ဒီအဆင့်ကိုလုပ်စရာမလိုပါဘူ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 9:19 AM2comments:
Samsung Corby2 GT-S3850 ကို firmware ပြန်တင်နည်း
Samsung Corby2 GT-S3850 ကို firmware ပြန်တင်ဖို့ အတွက် အရင်ဆုံး computer မှာ samsung
usb driver ကိုအရင်သွင်းထားပါ ပြီရင် samsung kies ကိုပါသွင်းထားရမှာပါ အာလုံအိုကေပြီဆိုရင်
firmware တင်ဖို့ အောက်မှာfirmware ကိုဒေါင်လိုက်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 8:58 AM 1 comment:
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 4:07 AM 1 comment:
Labels: SHARP, Sharp Root လုပ်နည်း
Windows ကို Update ပိတ်နည်းများ
windows7off updateဒါက windows7 အတွက် အောက်ပါအတိုင်း လိုက်လုပ်ပါ။၁။ Control Panel ဝင်ပါ ၂။ Category မှာ ကလစ်ပြီး Large icons ကို ကလစ်လိုက်ပါ ၃။Windows Update ဆိုတာကို ကလစ်လိုက်ပါ ၄။ ဘယ်ဘက်မှာပြန်ကြည့်ပါ Change settings ကိုကလစ်လိုက်ပါ ပြီးရင် Important updatesရဲ့အောက်နားက ဘားလေးကို Never check for updates (not recommended) ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ ပြီးရင်OK ပေးလိုက်ပါ။
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 12:17 AM No comments:
မြန်မာဖောင့် နဲ့ ပတ်သက်လို့ အခက်တွေ့နေသူများအတွက် စုစည်းတင်ပြသည်
မြန်မာဖောင့် နဲ့ ပတ်သက်လို့ အခက်ခဲ ဖြစ်နေသူတွေအတွက် စုစည်းတင်ပြပေးတာပါကျနော်ကိုယ်တိုင်ရေးတာတော့မဟုက်ပါဘူးဗျာ ဒါပေမယ့် လိုအပ်နေသူတွေအတွက် လွယ်ကူအောင်ဇော်ဂျီ မြန်မာဖောင့် ၁၄ မျိုး တစ်ခါတည်း ဒေါင်းလို့ ရအောင် ပေးထားပါတယ်
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 12:11 AM No comments:
ဒီဆော့ဝဲလ် လေးကတော့ Typing စာရိုက်လေ့ကျင့်သူများအတွက်
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 11:58 PM No comments:
PHOTOSHOP CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6 PORTABLE VERSION များစုစည်းခြင်း
Photoshop CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6 လေးတွေကို
စုစည်းပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံး Portable Version တွေပါ..
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 11:53 PM No comments:
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 10:52 AM2comments:
Labels: LG, LG Root လုပ်နည်း
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 12:16 AM No comments:
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 11:29 PM No comments:
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 11:23 PM 1 comment:
Labels: i mobile
မှားဖျက်မိတဲ့ ဖိုင်းတွေကို ပြန်ယူခြင်တဲ့ ဘောဒါများအတွက်
ကျွန်တော်တို့ဟာ တစ်ခါတစ်ခါမှာ ဖိုင်တွေကို မှားဖျက်မိတာမျိုး .. ဖျက်ထားပြီးမှ အသုံးလိုလို့ ပြန်ယူချင်တာမျိုးတွေ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 11:01 AM 1 comment:
ဖုန်းကိုလေချွန်ပြီး ရှာလို့ရတဲ့ Android App လေးပါ
whistle locater Pro verison လေးပါ။ ဒီဆောဝဲ ကိုသိပီးတဲ့လူလည်;ရှိမှာပါ မသိသေးတဲ့သူများကို ပြန်ရှယ်လိုက်ပါတယ်။
Andriod အတွက် livewall paper လေးပါ
Android ဖုန်းမျက်နှာပြင်မှာ ချယ်ရီပန်းတွေကြွေနေတဲ့ပုံစံ ထားခြင်တဲ့
ဘောဒါတွေ အတွက် Android App လေးပါ လိုခြင်သူများအောက်ကနေဒေါင်လိုက်ပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 10:11 AM No comments:
Crack, Serial Key နှင့် Patch တွေရှာပေးနိုင်တဲ့ Craagle Software
Title မှာပြောထားသလိုပါပဲ Craagle Software ကတော့ ကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့ Application တွေရဲ့ Serial Key တွေ၊ Patch File တွေကို Online မှ Crack, Serial နှင့် Patch တွေ တင်ပေးထားတဲ့ Website တွေနှင့် တိုက်စစ်ပြီး ရှာဖွေပေးနိုင်တဲ့ Software တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Software ကြောင့် ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲက Application တွေကို Licensed Version အဖြစ်ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်။
Dr.Emuler ဆိုတဲ့ လူက ရေးသားခဲ့တာပါ။
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 9:59 AM No comments:
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 9:43 AM No comments:
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 9:29 AM No comments:
ရုပ်ဆိုးတဲ့ သူတွေကို အရမ်းချော အရမ်းလှ သွားအောင် ဖန်တီးပေးမဲ့ Software လေးပါ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 9:22 AM 1 comment:
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 11:18 AM 1 comment:
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 11:16 AM No comments:
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 5:51 AM3comments:
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 1:40 AM No comments:
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 1:22 AM No comments:
စက်ရုပ်တွေအတွက်နော် apk တွေကို memory card ထဲကို ကော်ပီကူးထားလို့ရတယ် ကျွှန်တော်အရမ်းကြို
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ at 12:52 AM No comments:
Samsung galaxy s Advance i9070 ကို Jelly Bean 4.1....
Galaxy Note 10.1 16 Gb ကိုအလွယ်ကူဆုံး root လုပ်နည်...
Samsung Galaxy S GT-i9000 ကို offical 2.3.6 ပြန်တင...
Samsung Galaxy S3 Clone i9300 MTK6577 Android 4.1 ...
Samsung Galaxy Ace Plus GT-S7500, GT-S7500L အတွက်f...
K TOUCH W650 နှင့် W619 ကို official firmware ပြန...
imobile istyle Qနဲ့ စတဲ့ Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6 .ဖုန်းေ...
china tablet ( Cpu WM8650 ) သုံးတဲ့စက်တွေကို firmw...
မြန်မာဖောင့် နဲ့ ပတ်သက်လို့ အခက်တွေ့နေသူများအတွက် ...
PHOTOSHOP CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6 PORTABLE VE...
Chain tablet version 4.0.4 တွေကို အလွယ်ကူဆုံး roo...
မှားဖျက်မိတဲ့ ဖိုင်းတွေကို ပြန်ယူခြင်တဲ့ ဘောဒါများ...
Crack, Serial Key နှင့် Patch တွေရှာပေးနိုင်တဲ့ Cr...
ရုပ်ဆိုးတဲ့ သူတွေကို အရမ်းချော အရမ်းလှ သွားအောင် ဖ...
China Clone Android version 4.1.1 phone တွေကို r...
I Mobile I style Q2 ကို offical firmware ပြန်တင်န...